जापानबारे सबैभन्दा धेरै सुनिने ५ कुधारणा | Nepali In Japan
Wednesday, January 19जापानबारे सबै कुरा
ढकमक्कै चेरीका रुखहरु, फुजी हिमाल जापान भन्ने बित्तिकै तपाईको मनमा यस्तै अनेक कुरा आउन सक्छ । हरेक ठाउँको बारेमा मानिसको मनमा कुनै न कुनै गलत धारणाहरु हुन्छन् । उक्त स्थानबारे जानकारी जति कम भयो त्यति नै यस्ता धारणाहरु बढ्ने सम्भावना हुन्छ । जापानको बारेमा पनि यस्तै खालका धारणाहरु व्याप्त छन् । आजको यस लेखमा हामीहरु जापानबारे व्याप्त ५ कुधारणाबारे कुराकानी गर्नेछौं ।
१. सबै जापानीहरु काठको घरमा बस्छन् ।
तपाईले टोकियोको पछिल्लो तस्विर हेर्नु भएको छ ? यहाँका गगनचुम्बी भवनहरु त देख्नु भएकै होला । तपाईले अंग्रेजी फिल्म द लाष्ट सामुराईमा देखे जस्तो सबै जापानीहरु काठकै घरमा बस्दैनन् । पछिल्लो समय इटा, स्टिल र कंक्रिटका घरहरु बनाउने क्रम बढेको छ । यसको अर्थ जापानमा काठको घर नै छैन भन्ने चाँहि होइन । अधिकांश घरहरुमा परम्परागत घरका विशेषताहरु तातामी कोठा, फुसुमाह भने पाइन्छ ।
२. सबै जापानीहरुले भात खान्छन् ।
हो उनीहरुले भात खान्छन् । तर भात मात्रै खाँदैनन् । यसको साथमा अन्य धेरै खानेकुरा पनि खान्छन् । चाउचाउ, पाउरोटीदेखि सुशीसम्म अनि चिप्सदेखि स्पाघेटीसम्म जापानीहरुले खाने परिकारको सूचि निकै लामो छ । तर जापानमा मानिसहरुले स्यान्डविच भन्दा धेरै ओनिगिरी राइस बल खान्छन् अनि सामान्य खालका पाउरोटी भन्दा धेरै चामलको पाउरोटी खान्छन् । जापान चामल धेरै खपत गर्ने देश हो । यसमा भने कहिले पनि परिवर्तन नआउला । तर यसो भन्दैमा जापानीहरुलाई भातप्रेमी भन्न मिल्छ त ?
३. सबै जापानीहरुले एनिमे र मांगा मन पराउँछन् ।
तपाईहरुले एनिमे र मांगा मन नपराउने कति जापानीहरु चिन्नु भएको छ ? मैले त कम्तिमा पनि सय जना चिनेको छु । पछिला २ दशकमा यूरोप र एशियामा एकिने बूम देखिएको छ । यसले एनिमे/मांगालाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बिकेको अन्तरराष्ट्रिय संस्कृति बनाएको छ । तर जापानी एनिमे र मांगाप्रतिको अधिकांश झुकाव विदेशीहरुमा मात्रै सीमित छ भनेर मैले बताए भने नि ? अधिकांश ओताकुज वास्तवमा विदेशी भए नि ?
यसको अर्थ जापानी ओताकु नै छैन भन्ने चाँहि होेइन । छ, नत्र त आकिहाबारा विदेशी प्रडक्टमा मात्रै कसरी हुन्थ्यो । अहिले पनि जापानमा रेलमा मांगा पढ्ने अनि टिभीमा एनिमे हेर्नेहरु छन् । तर सबै जापानीले यसलाई मन पराउँछन् भन्नु सबै फ्रान्सेलीहरुले ब्रेकफाष्टमा क्रोएसन्ट खान्छन् अनि सबै अमेरिकीहरुले बर्गर मन पराउँछन् भने जस्तै हो । एनिमे बुमलाई जन्म दिने देश जापानमा सबैमा यसको लत भने छैन ।
४. सबै जापानीहरुले मरुन्जेलसम्म काम गर्छन् ।
यसका साँचो र झुठो दुबै पक्ष छन् । अनि सबैभन्दा झर्को लाग्दो चाँहि के भने हामी यो ‘स्टेरोटाइप’ मात्रै हो भनेर प्रमाणीत गर्न पनि सक्दैनौं । जापानीहरु लामो समयसम्म काम गर्छन् । कामकै लागि घरपरिवारको वेवास्ता गर्नेहरु पनि छन् । कम्पनीलाई दोस्रो घर पनि ठानिन्छ । यहाँ मानिसहरुले आफ्नो घरमा भन्दा धेरै समय बिताउँछन् ।
यसको अर्थ जापानीहरु काममा दास नै हुन्छन् भन्ने हुन्छ र ? पहिलो कुरा दासले तलब पाउँदैनन् । तर जापानमा तलब औसत भन्दा राम्रो छ । दोस्रो कुरा औसत जापानी कम्पनीले हप्तामा ५ दिन काम गरेर २ दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिन्छ । अधिकांश कम्पनीमा औसतमा बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ वा ६ बजेसम्म काम हुन्छ । एक घन्टा खाजा खाने छुट्टि हुन्छ । हरेक महिना कुल करीब ४० घन्टा ओभरटाइम हुन्छ ।
विगतका दशकमा धेरै काम गरेर कर्मचारीहरु मरेको घटनाहरु बढेपछि कम्पनीहरुले ओभर टाइम घटाएका छन् अनि काम गर्ने वातावरण पनि सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ । अहिले जापानमा काम गर्ने वातावरण विश्वका अन्य सभ्व देशको भन्दा खासै फरक छैन ।
५. सबै जापानीहरु धनी छन् अनि सबै कुरा अति नै महँगो छ ।
जापानीहरु मरिहत्ते गरेर काम गर्ने भएपछि सबै जना अति नै धनी छन् भन्ने तर्क आएको हुन सक्छ । अब तथ्यांकमा हेरौं । जापानमा औसत कलेज ग्र्याजुएटले पहिलो रोजगारीबाट करीब १ हजार ८०० देखि २ हजार २०० डलर कमाउँछन् । करार स्थायी हुन्छ । त्यसैले जीवनभर अर्को जागिर खोज्ने चिन्ता हुँदैन । मासिक १ हजार ८०० देखि २ हजार २०० डलर भनेको कति हो ? यो धेरै होइन । तर तल्लो तहका कर्मचारीका लागि अन्य देशमा दिइने तलको तुलनामा चाँहि यो राम्रै हो । अधिकांश जापानी कम्पनीहरुले ३० वर्ष नपुग्दासम्म ‘डोर्म’को सुविधा दिन्छन् । कामदारहरुको यात्रा खर्च पनि कम्पनीले पुनः फिर्ता दिन्छ । हरेक ६ महीनामा तलबको मूल्यांकन र वृद्धि पनि हुन्छ । हिसाब गर्ने हो भने ३० वर्ष पुग्दा औसत जापानीहरुको मासिक तलब करीब ४ देखि ५ हजार डलरसम्म हुन्छ । यो पक्कै पनि थोरै पैसा होइन ।
अब कुरा गरौं जापानको पदोन्नति प्रणालीको परम्परागत जापानी कम्पनीले १० वर्षसम्म एउटै पदमा बिताइन्छ । उमेरका आधारमा पदोन्नति गरिन्छ । पदोन्नति र निरन्तर वृद्धिको लागि ४० वर्षसम्म कुनु पर्छ । तर यूरोप र अमेरिकामा कुनै कामका लागि पर्याप्त अनुभव छ भने सहजै व्यवस्थापकबाट काम थाल्न सकिन्छ । यसमा तलब औसत भन्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो भए जापानीहरु धनी छन् त ? हो र होइन पनि । उनीहरु घर, कार किन्न अनि परिवार पाल्न सक्ने गरी धनी छन् । तर यहाँ भनिएको धनी भने सम्पत्तिमा मध्यम स्तर हो ।
बोनशः अक्षर उस्तै हुने भएकोले सबै जापानीहरुलाई चिनियाँ भाषा थाहा छ ।
अहँ, पक्कै पनि होइन ।
जापान र चीन दुई फरक फरक देश हुन् । लेख्ने प्रणाली, भाषा र संस्कृति पनि विल्कुल फरक छन् । यी दुबै भाषमा मिल्ने एउटै कुरा भनेको कान्जी हो । यी दुईबीच पनि निकै भिन्नता छ । एउटा जापानी वयस्कले ६० प्रतिशत मात्रै चिनियाँ लिखित बुझ्न सक्छ । मानिसहरुले मलाई कयौं पटक तपाईलाई चिनियाँ पनि बोल्न आउँछ भनेर सोधेका छन् । तर हरेक पटक मैले उनीहरुलाई आफू चीनमा नभएर जापानमा बस्ने गरेको अनि यिनीहरुले एउटै भाषा बोल्दैनन् भनेर भन्नु परेको छ ।
Posted in जानकारी
Prevयस्तो छ स्क्रिनिङ सर्टिफिकेट बारे बिस्तृत जानकारी
Nextजापानमा पार्टटाइम जागिर कसरी छोड्ने
यस्ता छन् जापानी कम्पनीहरुमा उपलब्ध ‘कल्याण भत्ता/लाभ’को प्रकारहरु
जापानमा सन्तानः जन्माउनु र हुर्काउनुको यथार्थता
जापानी कारमा टाँसिने स्टिकर र तीनको अर्थ
जापानमा चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने तरिका
हिउँमा स्की खेल्नका लागि उत्कृष्ट रिसोर्टहरु
जापानी जीवनबारे थाहा पाउनु पर्ने १० कुरा
यस्ता हुन्छन् जापानमा कर्मचारीले पाउने लाभहरु
यसरी गर्न सकिन्छ जापानमा छालाको स्याहार
यस्तो हुन्छ जापानी विवाहको शैली
जापानी भाषामा हुने भुँइचालो सम्बन्धी सूचनाहरु कसरी पढ्ने ?